ခုတလောကျန်းမာရေးဘလော့ဂ်တခုတွင်လှိုင်းထန်နေသည်။ ထိုလှိုင်းထဲမှ မြင်တတ်ပါက ပြည်သူများ၏ခံစားချက်ကိုမြင်နိုင်သည်။ အတွေ့အကြုံရှိဆရာဝန်တချို့၊ဆရာဝန်ဘွဲ့ရတချို့ဧ။်အတွေးအခေါ်နှင့်ခံယူချက်ကို သင်ခန်းစာရနိုင်သည်။ နောင်မျိုးဆက်သစ်အတွက် ဘာတွေသင်ပေးရမည်၊ ဘာတွေပညာပေးရမည်ကို ဆရာဝန်ဖြစ်လာမည့်လူငယ်များအားပညာသင်ပေးနေသည့်ဆရာတစ်ယောက်အနေနှင့် တွေးမိဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသည့်ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကို ရယူသည့်ပုဂ္ဂိုလ်များသည် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးအပြန်အလှန်လေးစားသင့်သည်။ လူနာ-ဆရာဝန်၊ လူနာ-သူနာပြု၊ လူနာ-ကျန်းမာရေးလုပ်သား၊ လူနာ-ဆေးရုံဆေးခန်းပေါက်စောင့်အလုပ်သမား.....စသည်စသည်ဖြင့် ဆက်ဆံနေရသော လူမှုဆက်ဆံရေးသည်၊ နွေးထွေးပွင့်လင်းသော၊ ကိုယ်ချင်းစာတရားရှိသောဆက်ဆံရေးဖြစ်သင့်သည်။ ဆရာဝန်တွေငွေမက်တယ်၊ လူနာကိုဂရုမစိုက်ဘူး၊ ဆရာဝန်တွေက...လူနာတွေက....သူနာပြုတွေက ဆိုသည့်အရေးအသားများက နဂိုကမှ အေးစက်လာနေခဲ့သော ထိုဆက်ဆံရေးများကို ရေခဲရေလောင်းပေးသကဲ့သို့ဖြစ်စေပြီးပဋိပက္ခပင်ဖြစ်လာစေပါသည်။
တဖက်မှလည်း ပြည်သူများနှင့်အနီးကပ်ဆက်ဆံကုသမှုပေးခဲ့ဖူးသဖြင့်လည်းကောင်း၊ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မိသားစုကျန်းမာရေးကိစ္စများအတွက်ဆေးရုံဆေးခန်းသွားခဲ့ရသည့်အတွေ့အကြုံအရလည်းကောင်း၊ ပြည်သူများခံစားနေရသည့်ခံစားချက်ကို ကိုယ်ချင်းစာနားလည်မိပါသည်။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဖက်မှ၊ အထူးသဖြင့်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ (ပြည်သူ့ဆေးရုံ-ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံဆေးခန်း) တော်တော်များများ (အားလုံးမဟုတ်ပါ) မေ့နေကြသောလိုက်နာရမည့် အရေးကြီးသည့်အချက်တချက်ရှိသည်။ လူတစ်ဦးကိုယ်အင်္ဂါတခုခုတွင်ရောဂါရသဖြင့် ဆေးရုံဆေးခန်းပြရသည်။ ထိုအခါကုသရေးဖက်မှတချို့သည်၊ ရောဂါဖြစ်သောအပိုင်းလေးကိုပဲကုလိုက်ဖို့ဘဲ စိတ်သန်လာခဲ့ကြသည်။ We are treating the patient asawhole, not merely the disease...ဆိုသည့်ကုသရေးသမားများထားရမည့်ခံယူချက်၊ ကိုယ်ချင်းစာတရားဖြင့်ကုသပေးရမည်ဆိုသည့်သမားကောင်းကျင့်ဝတ်စသည်တို့ကို မေ့လာကြ-လျစ်လျှူရှုလာကြသည့်သူများခုခေတ်မှာများလာသည်။ ရောဂါကုသပြီးရေးတစ်ခုတည်းကိုခေါင်းထဲထည့်ကာ၊ လူနာနှင့်ဆက်ဆံရေး၊
လူနာဧ။်တင်ပြချက်၊ ခံစားချက်၊ ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စသည်တို့ကိုထည့်မစဉ်းစားကြတော့သည့်သူများ-များလာခဲ့သည်ကို ဆေးလောကအသိုင်းအ၀ိုင်းက အမှန်ကိုအမှန်အတိုင်း အရှိကိုအရှိအတိုင်းလက်ခံကြရမည်ဖြစ်သည်။
အလားတူအရေးကြီးသည်မှာ ဆေးလောကသားများ စဉ်ဆက်မပြတ်ပညာဆည်းပူးရေးဖြစ်သည်။ အချိန်နှင့်အမျှ တိုးတက်ပြောင်းလဲနေသည့်ပိုမိုကောင်းမွန်သည့်ဆေးဝါးများ၊ ကုသနည်းများ၊ ရောဂါရှာဖွေဖော်ထုတ်သည့်ကိရိယာများစသည်တို့ကို မပြတ်လေ့လာနေ၊ ဖတ်ရှုနေပြီး၊ ကုသရေးကိုအဆင့်မြှင့်တင်နေသင့်သည်။ ကိုယ်ပေးနိုင်သည့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုသည် ခုခေတ်ခါတွင်အများလက်ခံသည့်အဆင့်မီစောင့်ရှောက်ကုသမှုမှဟုတ်ပါရဲ့လားဆိုတာ အမြဲဆန်းစစ်နေသင့်သည်။ လူနာတစ်ယောက်ကို ဆေးမပေးမီ၊ မခွဲစိတ်မီ၊ လူနာသာကိုယ့်မိဘ-ကိုယ့်သားသမီးသာဆိုလျှင် ဒီလိုကုသမှုမျိုးပေးမလား၊ ဒီလိုဆေးသောက်စေမလား...ကိုယ်တိုင်ကုသခံရမည်ဆိုလျှင်ရော...ဆိုသည်ကို၊ ကိုယ့််ဘာသာပြန်မေးခွန်းထုတ်ကြည့်ဖို့အလွန်အရေးကြီးသည်။ ချုပ်ပြောရလျှင်၊ စေတနာနှင့်ကိုယ်ချင်းစာတရားအရင်းခံဖို့ဖြစ်သည်။
ခေတ်စနစ်၏ဆိုးကျိုးကြောင့်ဖြစ်ရသည်ကို မီးမောင်းထိုးရေးပြသူများလည်းရှိသည်။ အလွန်မှန်ပါသည်။ ဒါကိုအများစုက မြင်တတ်ဖို့အရေးကြီးသည်။ သည်ခေတ်စနစ်ကြီးထဲမှာ စီးမျှောနေလိုက်ကြသူကများလာသည်။ လုပ်သင့်တာလုပ်သူကိုပင်သိုးမည်းဟုထင်လာသူများလာသည်။ ကျန်းမာရေးတခုတည်းမဟုတ်၊ ဘက်ပေါင်းစုံ နယ်ပယ်ပေါင်းစုံတွင်ဖြစ်သည်။ သိုးမည်းဟုပဲအခေါ်ခံရပါစေ သည်လိုဖောက်ထွက်မည့်သူတွေများလာစေရန်မှာ ကိုယ်တိုင်လည်းကျင့်ကြံ၊ နောက်မျိုးဆက်လူငယ်များကိုလည်းသင်ပြပေးရမည့် သင်ကြားရေးဆရာတို့၏တာဝန်ပင်ဖြစ်ပါတော့သည်။
Posted by Dr. Nyan at 6:08 AM
ဆရာရေ အရမ်းကောင်းတဲ့ ဆောင်းပါးပါ။ ဖြစ်သင့်တာလေးတွေကို အပြုသဘောသုံးသပ်ထားတယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ မေးလ်ကနေဖြန့်ဝေချင်လို့ ကူးယူသွားပါတယ် ...
it's fair post.
Thanks. I want to read such kind of fair post. I didn't mean all doctors have lack of saytanar.
" လူနာတစ်ယောက်ကို ဆေးမပေးမီ၊ မခွဲစိတ်မီ၊ လူနာသာကိုယ့်မိဘ-ကိုယ့်သားသမီးသာဆိုလျှင် ဒီလိုကုသမှုမျိုးပေးမလား၊ ဒီလိုဆေးသောက်စေမလား...ကိုယ်တိုင်ကုသခံရမည်ဆိုလျှင်ရော "
ဆရာရေးထားတာကိုသဘောကျလို. သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေများကို ဆရာ.ဆောင်းပါးဖတ်ကြည်.ဖို. ညွှန်းလိုက်ပါတယ်။
ဆရာခင်ဗျား..ကျတော်က ဆရာ့စာဖတ်ပရိတ်သတ်တစ်ယောက်ပါ။ ကျတော်တို့လင်မယား ၂ယောက်လုံး သမီးလေးကို မိဘများနဲ့ထားခဲ့ပြီး မလေးရှားမှာ စီးပွားလာရှာသူတွေပါ။ ကျတော်တို့ထွက်လာစဉ်က သမီးလေးဟာ ၅နှစ်သမီးလေးမို့ သွားမလဲသေးပါဘူး။ အခုတော့ သွားလဲပြီး သွားသစ်များထွက်နေတယ်လို့ ဖုန်းဆက်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ရှေ့သွားတွေက မညီဘူးလို့လည်းပြောပြပါတယ်။ မနေ့ကဖုန်းဆက်တော့ သူတို့ရဲ့ ကျောင်းကျန်းမာရေးက သွားဆရာဝန်က သမီးကို ညအိပ်ရင် သွားထဲထည့်ပြီးကိုက်အိပ်ရတဲ့ဟာရှိတယ် ။ အဲဒါကို သမီးလေး သုံးရင် သွားတွေလှလာမယ်။ဖေဖေမေမေကိုဝယ်ပေးခိုင်းပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ၁၀နှစ်ကျော်ရင် မသုံးရတော့ဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ ဆရာဝန်ပြောတာကို သူပြန်ပြောပြတာပါ။ အဲဒါက ဘာပါလိမ့် ။ ကျတော်က ၀ယ်ပေးချင်လို့ပါ။ ပြီးတော့ သုံးသင့်မသုံးသင့် သိချင်ပါတယ်ခင်ဗျား။ သမီးလေးက အခုလာမဲ့ ဖေဖေါ်ဝါရီဆိုရင် ၉နှစ်ပြည့်ပါပြီ။
အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကိုထွန်းရဲ့သမီးလေးနဲ့ကျွန်တော့်သမီးလေးအသက်အတူတူပါဘဲ။ ဒါကြောင့်သွားလဲချိန်လည်းတူနေပါတယ်။ ကိုထွန်းသမီးသွားက ဘယ်လိုမညီတာလည်းဆိုတာ၊ ဓာတ်ပုံဖြစ်ဖြစ်မြင်ရရင်တော့ ကုသဖို့လိုမလိုအကြံပေးလို့ရပါတယ်။ ဒီအသက်မှာအပေါ်ရှေ့အလယ်သွားကြီးနှစ်ချောင်းထွက်လာပြီး၊ သွားနှစ်ချောင်းက မစေ့နေတတ်ပါဘူး။ ဘေးကပ်ရက်တဖက်တချက်က နံပါတ်၂ရှေ့သွားတွေထွက်တဲ့အသက် ၉နှစ်ကနေ၁၀နှစ်လောက်မှာ ဘေးသွားတွေတွန်းအားနဲ့စေ့သွားပါမယ်။ သွားတွေမစုံသေးတဲ့အရွယ်ဆိုတော့၊ အလွယ်တကူပစ္စည်းဝယ်တပ်ခိုင်းမယ့်အစား၊ ပိုနားလည်တဲ့ကလေးသွားအထူးကု၊ သွားညှိအထူးကုစတာနဲ့အရင်ပြကြည့်ပြီး အကြံဥာဏ်ယူသင့်ပါတယ်ခင်ဗျား။
ပြန်လည်ဖြေကြားပေးလို့ ကျေးဇူးအထူးပါဆရာ။ သမီးရဲ့သွားကို သီးသန့်ရိုက်ထားတဲ့ပုံလည်း ကျနော့်မှာမရှိတော့ ဆရာ့ကိုသေချာမရှင်းပြနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ ကျနော်လည်း web cam မှာပဲမြင်ဖူးတာပါ..ဆရာပြောသလို သွားကြီးပြီးကျဲနေတာတော့ တွေ့တယ်ဗျ။ ကျတော်တို့လည်းတောင်ကြီးကပါပဲ ခင်ဗျ။ကလေးသွားအထူးကု နဲ့ပြဖို့ အိမ်ကိုဖုန်းဆက်လိုက်ပါ့မယ်ခင်ဗျား။
မင်္ဂလာပါ။ စာလာဖတ်သွားပါတယ်။ မိခင်တိုင်းပြည်ရဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပကတိအခြေအနေကို အမှန်တိုင်း သိမြင်နေတဲ့ ကျန်းမာရေး ပညာရှင်တယောက်အဖြစ် ခန့်မှန်းမိလို့ ၀မ်းသာပါတယ်။ တိုးတက်ပြောင်းလဲမှု တခုဖြစ်ဖို့ဆိုတာ မိမိတဦးတည်းဆန္ဒနဲ့ လုပ်လို့မဖြစ်နိုင်၊ တဦးကောင်း တယောက်ကောင်းနဲ့လည်း လုပ်လို့မရတော့ သိပ်ကိုခက်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးကဏ္ဍမှာမှ မဟုတ်ပါဘူး အဘက်ဘက်က ဆုတ်ယုတ်နေတာကို အမှန်တိုင်းသိမြင်ပြီး ပြုပြင်ပြောင်းလဲလိုသူ များလာပါစေလို့ပဲ ဆုတောင်းရတော့တယ်။ ကျွန်မဘလော့ဂ်ကိုလည်း လာလည်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ ဒီဘလော့ဂ်က ကျန်းမာရေး ပညာပေးနဲ့ ဆိုင်တဲ့ ဆရာ့ပို့စ်တွေကိုလည်း Public Health in Myanmar မှာ တင်ပေးစေချင်တယ်။
စောင့်ဖတ်နေရင်း ဘယ်လိုဖြစ်ပြီး ဒီပိုစ့်တခု ကျန်ခဲ့တယ်မသိပါ။ ဆရာ့ကိုလေးစားပြီးရင်း လေးစားမိပါတယ်။ အမှန်ကို အမှန်တိုင်းသိပြီး သိတဲ့ အတိုင်းဘက်မလိုက်ပဲ ဝေဖန်အကြံပြုနိုင်မှသာ အများကောင်းကျိုးဖြစ်စေမယ်လို့ ယုံကြည်မိပါတယ်။
ပညာတွေ အများကြီးတတ်ပြီး အရှက်မဲ့စွာ ငါ့စကားနွားရပြောတတ်သူများကို ဒီဂယက်အတွင်းမှာ မြင်လိုက်ရတော့ စိတ်မကောင်းခြင်းကြီးစွာဖြင့် ရွံရှာမိခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ်ချင်းစာတရားလက်ကိုင်ထားသော ပညာတတ် လူကောင်းလူတော်များ များများပေါ်ပေါက်ပါစေ ဆုတောင်းပါတယ်။